သင်နဲ့ သင့်ပါတနာဟာ လုံးဝသူစိမ်းတွေ ဖြစ်လာနေတဲ့ လက္ခဏာ (၇)ခု - Lifestyle Myanmar
ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံတုန်းကလို ပျော်ရွှင်ရခြင်းကို ရပ်တန့်စေတဲ့ အချက်ကို ရည်ညွှန်းထားသော “7-year itch ” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို သင်ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါက အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုမှာ စုံတွဲတွေဟာ အိမ်ထောင်သက် ခုနစ်နှစ်မြောက်ကို ရောက်လာတဲ့အခါ အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် ပျင်းရိလာတာ၊ လတ်ဆတ်မှု၊ ဆွဲဆောင်မှု မရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားရတာမျိုးကို ပြောတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကွာရှင်းမှု အချက််အလက်တွေအရ ဒီ” အန္တရာယ်ဇုန်” ဟာ ၅နှစ်မှ ၈နှစ်အကြား ဖြစ်ပျက်ပါတယ်။ ကြီးမားသော အကြောင်းပြချက်တွေထဲက တစ်ခုက အိမ်ထောင်ရေးမှာ အားထုတ်မှုမရှိခြင်း၊ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ အပြောင်းအလဲမရှိတဲ့ အထဲမှာ ရှိနေခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ စုံတွဲအချင်းချင်း ထိတွေ့မှုကို ဆုံးရှံးစေတဲ့အရာတွေနဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်ကို လျစ်လျူမရှုသင့်တဲ့ သတိပေးချက် (၇)ချက်ရှိပါတယ်။
၁။ သင်ဟာ သင့်လက်တွဲဖော်ကို မကြာခဏ စပရိုက်လုပ်ပေမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး
သင့်လက်တွဲဖော်ပြောသမျှ၊ လုပ်သမျှအရာတွေက သူတို့ကာရိုက်တာနဲ့ တခြားစီဖြစ်နေတာကို သင်တွေ့ရပါတယ်။ သင့်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထိတွေ့မှုကို ရပ်တန့်ခဲ့တာကြောင့် ပြောဆိုဆက်ဆံမှု ဒီလိုမခိုင်မာတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကြီးထွားခြင်း ၊ပြောင်းလဲခြင်းကို ဘယ်တော့မှ ရပ်တန့်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူ။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ၊ အကြိုက်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှု ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုရင် အဲဒါက နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းချက်- အနည်းဆုံး တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်လောက် သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နေသလဲ? ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က သူတို့ကို အံ့အားသင့်စေတဲ့ အရာတစ်ခုကဘာလဲ? ဆိုတာကို မေးပါ။ ထို့အပြင် တစ်ပတ်အတွင်း အနည်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ကားကို အတူတူကြည့်ပါ၊ သင်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးပါ။
၂။ သင်ဘယ်တော့မှ နောက်ထပ် ရန်မဖြစ်တော့တာ
ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ စုံတွဲတွေက ဘယ်တော့မှ ရန်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုပါ။ ရန်ဖြစ်ခြင်းက စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကနေ ဖြစ်ပွားပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော် လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုခုကို သင်မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင် သင်ဟာ အနာဂတ်မှာ တူညီတဲ့ ပြဿနာကို ထပ်လုပ်ခြင်းကနေ ရပ်တန့်ဖို့အတွက် သူ့တို့အား အသိပေးလိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီခက်ခဲတဲ့ စကားဝိုင်းကို သင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ဒီဟာက ပင်ပန်းနွယ်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်စေခြင်းနဲ့ အဆုံးမှာ တွယ်တာမှုကင်းမဲ့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းချက်- သင့်လက်တွဲဖော် လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သင်ဘယ်လို ခံစားရတယ်ဆိုတာကို ဂရုစိုက်ပါ၊ ဒါကိုလျစ်လျူမရှုထားပါနဲ့။ သင်စိတ်ဆိုးနေရင် သူတို့အား အသိပေးပါ။
၃။ သင့်လက်တွဲဖော် မုန်းနေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက် နာမည်ကို မမှတ်မိတာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုးချိန် အများစုကို အလုပ်မှာသုံးကြရတာကြောင့် အလုပ်မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ပျက်စရာအချို့ကို အိမ်သို့ မယူလာဖို့ဆိုတာ လက်တွေ့မှာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်သော စုံတွဲတွေဟာ နေ့စဉ်ကိစ္စရပ်တွေမှာ “Weather check” ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်တွေက သူတို့အလုပ်ခွင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်မျှဝေသလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်လောက်မှတ်မိနိုင်မလဲ? အဖြေက တိတ်ဆိတ်မှု ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သင်တို့မှာ ပြောဆိုဆက်ဆံမှု (communication) ပြဿနာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းချက်- လာမယ့် အစည်းအဝေးအကြောင်း သူတို့ဘာပြောသလဲဆိုတာ သတိပြုပါ။ တိကျတဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးပါ။ သင့်ပါတနာက သင်စိတ်ဝင်စားကြောင်း၊ သင့်မှာ ငြီးငွေ့စရာ စိတ္တဇပြောဆိုမှုတွေ မရှိတော့ကြောင်း သတိပြုမိလာပါလိမ့်မယ်။
၄။ သင်ဟာ သူတို့နဲ့ သတင်းကောင်းတွေ မျှဝေချင်စိတ်မရှိဘူး
မယုံနိုင်လောက်တဲ့ သတင်းတစ်ခု သင်ရလာပြီဆိုပါစို့၊ သင်ဖုန်းခေါ်ချင်တဲ့သူ၊ စာပို့ချင်တဲ့သူက ဘယ်သူလဲ? သင့်ရဲ့ ပထမဆုံး (သို့) ဒုတိယရွေးချယ်မှုတွေက သင့်လက်တွဲဖော်မဟုတ်ရင် သင့်မှာ အလှမ်းကွာမှု သိသိသာသာ ကြီးထွားနေပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းချက်- ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို စဉ်းစားပါ။ သူတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကြောင့် သင့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်နဲ့ သတင်းတွေ မျှဝေတာ ရပ်တန့်ခဲ့သလား ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောဆိုဆက်မှုမရှိယုံလေးလား? ဘယ်နည်းနဲ့မဆို သင့်ဆက်သွယ်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။
၅။ သင့်ရဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုတွေက ရေရှည်သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်ဘူး
နှစ်ယောက်အတူရှိနေချိန်မှာ ကိုယ်ကဖုန်းသုံးနေတယ်၊ သူကဘေးနားမှာ ဘာမှမလုပ်ရဘဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်မနေရတဲ့ အချိန်တွေကို သတိရကြည့်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ စုံတွဲတွေဟာ နှစ်ယောက်အတူတူရှိနေချိန် ကိုယ်စီအလုပ်ရှုပ်နေရင်တောင် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေသင့်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းချက်- တစ်ခုခုကို တစ်ပတ်လောက် အတူတူလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် တဖြည်းဖြည်းချင်း စတင်ကြည့်ပါ။ ဒါက ဘုတ်ဂိမ်းကစားတာ၊ တီဗွီကြည့်တာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည်တာ၊ (သို့) အတူတူချက်ပြုတ်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၆။ သင့်ကိုယ်သင် မျက်လုံးခြင်းမဆုံမိအောင် ရှောင်နေတာကို သတိပြုမိခြင်း
မျက်လုံးချင်းဆုံတာက အခြားသူတွေနဲ့ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပါတနာတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို တွန်းအားပေးပါတယ်။ သင်ဟာ သူတို့အကြည့်ကို ရှောင်ရှားရင် စကားမပြောချင် ၊ နားမထောင်ချင်ဘူးလို့ ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းချက်- မျက်လုံးချင်းဆုံတဲ့အခါ သူတို့ကို ပြုံးပြပါ။ သူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပါ။
၇။ နောက်ထပ် ဂရုမစိုက်တော့တာ
သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ။ ဒီဆောင်းပါးမှာပါတဲ့ လက္ခဏာတွေကိုသာ ဖတ်ပြီး ဖြေရှင်းချက်ကို ကျော်သွားသလား (သို့) သူတို့ကို ဒုတိယအတွေးမှာတောင် မပေးမိဘူးလား? သင်ယခင်က ရှိခဲ့တဲ့ connection ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ သင်စိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ သင်အဆင်ပြေနေတယ်။
ဖြေရှင်းချက်- သူတို့နဲ့ စကားပြောပါ။ သင့်အချစ်ရေးမှာ ကင်းမဲ့နေတဲ့အရာတွေ၊ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံးကို သင်နဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်မှာ ပွင့်ပွင်းလင်းလင်း ဆွေးနွေးဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။